Wasiirka Amniga qaranka iyo ku xigenkiisa oo maanta lagu wado in la magacaabo. | Starfm.co.ke	Wednesday, May 22nd, 2013	Home
Wasiirka Amniga qaranka iyo ku xigenkiisa oo maanta lagu wado in la magacaabo.
Published on June 18, 2012 by Sacdiya Garabey · No Comments
Share18.June.2012:- Madaxwayne Kibaki iyo Raisul Wasaare Raila Odinga ayaa maanta lagu wadaa in ay ku dhawaaqaan magacaabida wasiirka Amniag Gudaha iyo ku xigeenkiisa.
Arintani ayaa imaanaysa ka dib markii si rasmi ah loo aasay Wasiiradii Jagadasi haya oo dhawaan shil diyaaradeed ku geeriyooday kuwaasi oo kala ahaa Prof George Satoti iyo Orwa Ojode.
Labadani Masuul oo ku geeriyooday shilkii diyaaradeed ee Dalka ka dhacay asbuuc ka hor gaar ahaan Kaynta Ngong ayaa hayay xilal muhiim ah oo la xiriira Amniga Gudaha taasi oo ay dad badan ku taliyeen in ay tahay in dhaqso loo buuxiyo .
Jagooyiinkani ayaa lagu wadaa in la buuxiyo maanta ka hor inta uusan madaxwayne Kibaki u duulin dalka Brazil halkaasi oo uu uga qayb galayo kulan caalami ah oo looga hadlayo hormarka oo ay soo abaabushay QM .
Geerida Saitoti iyo Ojode ayaa ku soo beegantay xili ay jiraan qataro badan oo dhanka amaanka ah gaar ahaan weerarada argagixisada,masuuliyiinta Cusub ee lagu wado in maanta la magacaabana waxaa horyaala shaqooyin aad u adag.